Afqanistan: Qarax xooggan oo 80 qof ku dilay caasimadda Kabul – Kasmo Newspaper
Afqanistan: Qarax xooggan oo 80 qof ku dilay caasimadda Kabul
Updated - May 31, 2017 11:42 am GMT
London (Kasmo), Qarax aad u culus oo gaari loo adeegsaday ayaa saaka ka dhacay Kabul, caasimadda Afqanistan, Wasaaradda Caafimadkuna waxay warbixin hordhac ah ku sheegtay tirada geerida 80, dhaawacuna ilaa 350 qofood.
Qaraxa waxaa laga fuliyay Barxadda Zanbaq, bartamaha Xaafadda Dibolomaasiyiinta ee ku dhow Xarunta Madaxtooyada, waxaana burburay daaqadihii masaafo u jirta ilaa 300 oo mitir. Aagga qaraxu ka dhacay oo si aad ah loo ilaliyo waxaa ku yaalla Taliska Hawlgalka “Resolute Support Mission” ee Ciidammada Caalamiga ah ee dagaalka kula jira argagixisada Taliban iyo Daacish, lamana sheegin cid wax ka soo gaareen.
Maraykanka waxaa ka jooga Afganistan ciidan gaaraya 8,400 oo askari, 5,000 oo kalena waxay ka joogaan dalalka Gaashaanbuurta NATO, kuwaas oo laga yaabo in la sii kordhiyo muddooyinka soo socda.
Kooxda Taleban ayaa iska fogeysay mas’uuliyadda qaraxa, Afhayeenkooda, Zabihullah Mujaahid ayaa dhaleeceeyay weerar noocan ah ee rayidka, waxaana qaraxa lagu tuhmayaa kooxda Daacish oo iyadu iclaamisay Ololaha Ramadaanka.
Taleban waxay bilowgii Gu’ga ku qaadeen weerar ciidanka nabadgalyada, waxayna Saldhig Ciidan oo ku dhow Mazari-i-Sarif ku dileen 140 askari oo tababar ku jiray.